. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အဖေများနေ့အမှတ်တရ
ငယ်ငယ်တည်းက ဖေကြီးက သမီးမိန်းကလေးဆိုတော့ မိုးခါးကို ပိုတယ် .. ခုအသက်ကြီးလာတော့လည်း အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ .. မောင်လေးနဲ့က အစေးမကပ်ဘူးလေ .. ယောကျာ်းလေး ထုံးစံပေါ့ ..
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မေကြီးက ရိုက်တယ် .. စနေသမီးဆိုတော့ စိတ်ကြီးတာလည်းပါတယ် .. ပြောမရတာလည်းပါမှာပေါ့ .. :P
ဖေကြီးကတော့ မေကြီးရိုက်ရင်တောင် မရိုက်ဖို့ ပြောတတ်တယ် .. ဒီတော့ ဖေကြီးက မိုးခါးကို ပိုချစ်တယ်ထင်တယ် .. ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေကြီးက သဘောင်္လိုက်တော့ တူတူနေရတဲ့အချိန်သိပ်မရှိဘူး ..နေရတဲ့အချိန်သိပ်မရှိတော့ တွေ့တဲ့အချိန်မို့တည့်တာ .. နောက်ပိုင်း သဘောင်္မလိုက်တော့ပဲ အိမ်မှာတူတူနေတော့ နောင်ဂျိန်တာပဲ .. :D .. သားသမီးနဲ့ မိဘ ထုံးစံပေါ့နော် .. ခု အဝေးကနေဆိုပြန်တော့ ဖုန်းဆက်တိုင်း အလွမ်းသယ်ပြန်ရော ..
မိုးခါးအကျင့်ကလည်း ကိုယ်က မှားနေရင်တောင် ကိုယ့်အသိနဲ့ပဲ ကိုယ်ပြင်ချင်တာ .. ပြောလို့လုပ်တာမျိုး ဘာလို့မလုပ်ချင်မှန်းကိုမသိဘူး .. ဒီကိစ္စတခုကို လုပ်မယ်စဉ်းစားထားတာတောင် တယောက်ယောက်က လုပ်လိုက်ပါလားဆို လုပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားတတ်တယ် ..
ဖေကြီးနဲ့ တည့်တာက မိုးခါးဘာလုပ်လုပ် အားပေးတယ် .. အကြံဥာဏ်ပေးတယ် .. ဘာလုပ်ချင်လည်း လုပ်ခွင့်ပေးတယ် .. မေကြီးကတော့ စိတ်ပူတတ်တယ် .. စိုးရိမ်တတ်တယ် .. ငယ်ငယ်ကတော့ ဖေကြီးနဲ့ ပိုတည့်တယ် .. ပိုလုံးတယ် ..
မတည့်တာတခုတော့ရှိသေးတယ် .. အဲဒါက ဖေကြီးက ညဘက်ဆို စောစောအိပ် .. မနက်ဆို စောစောထ .. မိသားစုလိုက် လမ်းလျှောက် အဲလိုမျိုးအရမ်းသဘောကျတယ် .. မိုးခါးက ညဘက်သာညဉ့်နက်ခံနိုင်တာ .. မနက်ဆို မထချင်ဘူး .. နှိုးပြီဆိုလည်း အရမ်းစိတ်ညစ်တာ .. စူပုတ်နေရောပဲ .. အဲလိုဆို မတည့်တော့ဘူး .. ဖေကြီးကလည်း မနက်နေမြင့်အောင် အိပ်ရင် လုံးဝမကြိုက် .. မိုးခါးကတော့ မနက်ဆို လုံးဝမထချင် .. အဲလိုနဲ့ မနက်တိုင်း အဆင်မပြေဘူး .. :D
ဖေကြီးက ဘယ်ကိုပဲသွားသွား မိန်းမရော ကလေးတွေရော အကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီး သွားချင်တယ် .. သူ့အနားမှာ အမြဲနေစေချင်တယ် .. တခါတလေတော့လည်း တယောက်တည်းနေချင်တာမျိုး သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး နားထောင်ချင်တာမျိုး အဲလိုအချိန်တွေကျ လူကြီးတွေ အပြင်သွားနေရင် အရမ်းသဘောကျတာ .. သူငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီး သောင်းကျန်းတယ် .. မုန့်တွေ လုပ်စား .. သီချင်းတွေဖွင့် .. အဲလိုနေချင်တော့ ဖေကြီးအပြင်သွားမယ် လိုက်ခဲ့ဆို မလိုက်ချင်ဘူး .. အဲလိုဆို စိတ်ဆိုးရော .. သူငယ်ချင်းတွေကို တော်တော်ချစ်တယ် .. ကိုယ့်အဖေကိုတော့ အဖော်မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော ..
တခါတလေကျတော့လည်း တွေးမိရင် ဖေကြီးကို သနားတယ် .. အိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်တခုလုံးရဲ့ တာဝန်ကို ခုထိယူရတုန်း .. ကိုယ့်အပေါ်မှာ အားကိုးနေတဲ့ မိသားစုအတွက် အားကိုးအားထားပြုစရာ လူသားတဦးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရတယ် .. မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် မိသားစုနဲ့ မခွဲချင်ပဲ ပင်လယ်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ် .. နောက် ရန်ကုန်ကိုပြန်လာပြီး ကုမ္ပဏီတခုမှာ အလုပ်ဝင်တော့လည်း ဆိုးလိုက်တဲ့ သူဌေး .. ပြင်သစ်သူဌေးဆိုတော့ စကားအပြောအဆိုလည်း ရိုင်းတယ် .. အလုပ်ဆိုရင်လည်း ပေးထားတဲ့ရာထူးနဲ့ လစာနဲ့ မတန်အောင် စိတ်ပင်ပန်းရတယ် .. ပြီးတော့ အကောင်းပြောမခံရဘူး .. ဒါပေမယ့် ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီးလုပ်ရတာပဲ ..
အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာ မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့တာတွေကို ပြောပြရင် အရမ်းသနားတာပဲ .. မိသားစုနဲ့ တူတူနေချင်ပေမယ့် ခုထိ တူတူမနေနိုင်သေးဘူး .. မိုးခါးဒီကို စရောက်ခါစကဆိုရင် မိုးခါးတို့ မိသားစု ၄ယောက်က တယောက် တနေရာစီမှာ .. အဲဒီအချိန်တုန်းက ဖေကြီးက ရန်ကုန် .. မိုးခါးက စင်ကာပူ .. မေကြီးက ရုံးက တာဝန်နဲ့ သံတွဲမှာ နေရတဲ့အချိန် .. မောင်လေးကတော့ မေမြို့မှာပေါ့ .. ခုတော့ မေကြီးက ရန်ကုန်ပြန်ပြောင်းရပြီ .. ဒါပေမယ့် မကြာခင် နေပြည်တော်ပြောင်းရမယ်တဲ့ ဖြစ်ပြန်ပြီ .. မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် .. မိသားစု တပူးတွဲတွဲကြီးနေလို့မှမရသေးတာပဲလေ .. ခုလို အဆင်ပြေပြေနေနိုင်နေတာကိုပဲ ၀မ်းသာရမှာပဲလို့ တွေးရတာပါပဲ .. ခုလည်း ဖေကြီးဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝသေးဘူး .. နောက်ဆို ဒီမိသားစု တူတူနေဖို့ဆိုတာလည်း ပိုသာခက်သွားမှာပါ .. ဒါပေမယ့်လည်း အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်နေမယ်ဆို ဖြေသာပါတယ် .. ဒါနဲ့ပဲ ဖြေသိမ့်နေရတာပါပဲ ..
ဖေကြီးက မိုးခါးအတွက် အမြဲတမ်း မိုးခါးဘက်က ရပ်တည်မယ့်လူသားတဦးပါ .. (မေကြီးလည်းပါတာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် အဖေများနေ့မို့လို့ ဖေကြီးက ဦးစားပေးပေါ့ ..း) မိုးခါးအတွက် အန္တရာယ်တွေကို ကာရံပေးမယ့် တံတိုင်းတခု .. မိုးခါးဘက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိနေစေဦးတော့ ဖေကြီးကတော့ရှိနေမှာ .. ဒါကိုယုံတယ် .. ဖေကြီးမေကြီးတို့ကို မြင်ပြီး ၀င်ခံစားဖူးတယ် .. မိဘဖြစ်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်တခုပါ .. မိဘဖြစ်ဖို့လွယ်ပေမယ့် တာဝန်ကျေဖို့ ခက်ခဲပါတယ် .. မိဘဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ် .. တာဝန်ကျေသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ ပေးဆပ်ရတာတွေသိပ်များလွန်းတယ် .. မိဘဆိုတာ သားသမီးအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ သက်သက်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ .. သားသမီးက ပြန်ကြည့်ရင်ဝမ်းသာတတ်ကြပေမယ့် ဘာပြန်ရမလဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလာတာတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပိုသိလာရပါတယ် ..
မိုးခါးလည်း မိဘတွေကို စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ တခါတလေ စိတ်ဆင်းရဲစေမိပြန်ရော .. အရာအားလုံးအတွက် ဖေကြီးရော မေကြီးရောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကြိုးစားရဦးမှာပါ .. မိုးခါးရဲ့ ဖေကြီး မေကြီးအပါအ၀င် မိသားစုတခုလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖို့ ဒီကနေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် .. မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးနဲ့ မိသားစုဝင်တွေအားလုံးလည်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..း)
ရေးသားသူ moekhar at 6/14/2009 04:58:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဘ၀, အမှတ်တရ